Ciidamadda Qaranka oo lagu Tababari doono Gudaha Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Ciidamadda Qaranka oo lagu Tababari doono Gudaha Soomaaliya
Nairobi (Keydmedia) - Kadib Shir ka dhacay dhawaan Caasimada Ethiopia ee Addis Ababa ayaa la isku raacay in Ciidamda Qaranka hada kadib lagu tababaro Wadanka gudihiis.
Wasiirka Gaashaandhiga ee Soomaaliya ahna ku xigeenka R/wasaaraha Xuseen Carab Ciise oo kulankaasi ka qayb galay ayaa sheegay in la isku raacay waxyaalo badan.
Mr. Carab waxaa uu sheegay in shirkaasi lagu gorfeeyey in si rasmi ah Soomaaliya looga taageero isla markaasnala xoojiyo sidii dalka ay Dowladu gacanta ugu wada dhigi lahayd.
Dhinaca kale waxaa shirkaasi uu sheegay in uu ka soo baxay qodob xasaasi ah kaasi oo dhigaya in ciidamada Dowlada KMG ah ee Soomaaliya ee haatan tababarka ku qaata dalalka debeda in ay hadda kadib ku qaadandoonaan gudaha dalka.
Wasiirka Gaashaandhiga waxaa uu sheegay in uu arintaasi aad u soo dhoweeyey isla markaasna aytahay guul soo hoyatay, isagoo weliba xusay in ay haatan dhiri gelin ku samayn doonaan ciidamo hor leh oo tababar qaadan doona.